Frequently asked questions for employers (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions for employers (isiXhosa)
Employers - isiXhosa
Employers - Afrikaans
Nceda ujonge izikhokelo zethu zempilo kwindawo yokusebenzela ezinika iingcebiso kubaqeshi malunga nendlela yokwenza indawo yokusebenzela ikhuseleke ukunqanda ukunwena kweCovid-19.
Ukuba ukholelwa ekubeni ishishini alizilandeli ezi zikhokelo zempilo zimiselweyo zokunqanda ukunwena kweCovid-19, unokulixela elo shishini ngokusebenzisa le fomu ekwi-intanethi.
Amashishini mawanike ingxelo engomsebenzi owosuleleke yiCovid-19 kwindawo yokusebenzela, kwiSebe lezeMpilo leNtshona Koloni ngale fomu ekwi-intanethi.
Dawunlowuda imigaqo karhulumente enxulumene nokhuseleko kwindawo yokusebenzela:
UMgaqo oHlanganisiweyo weNtsholongwane yeCovid-19 ongaManyathelo weMpilo noKhuseleko eMsebenzini kwiindawo ezithile zoMsebenzi
IMigaqo: IiProthokholi zeeNkonzo zoNakekelo loBuqu bomntu
Ishishini lam lisengxakini ngenxa yokuqhambuka kwesifo iCovid-19 – ngubani endingathetha naye ukuze ndifumane iingcebiso nenkxaso?
Sizimisele kwaye sizinikele ekuxhaseni amashishini ngeli xesha lobunzima. Sikunye neWesgro, iSixeko saseKapa nabaxhasi boshishino, sihlaziye ngokusemthethweni “Covid-19 Content Centre for Business”, amaziko abalulekileyo nadingekayo awenziwe ngamacandelo eengcali kunye neengcali zonxibelelwano, abekiwe amalungiselelo okuphuhlisa umxholo ekunokuthi kuxhonyekweke kuwo,ukunceda ushishino nokuphendula imibuzo nemiba yoshishino enomdla.
Amashishini afuna inkxaso ayakhuthazwa ukuba athumele imibuzo yabo kule dilesi: supportbusiness@wesgro.co.za.
Ishishini lam livumelekile ukuba lisebenze ngelixesha le-Alert level 4 – kufuneka ndenze ntoni ukuze ndivule?
Njengomqashi, kufuneka unike wonke umsebenzi othi adibane namalungu oluntu njengomsebenzi wakhe imaskhi eyenziwe ngelaphu ukuze agqume impumlo nomlomo okanye imaskhi eyenziwe ekhaya eyogquma impumlo nomlomo xa ekwindawo enebantu, okanye nantoni elungileyo elilaphu elithi logqume impumlo nomlomo.
Zonke izakhiwo zamashishini, ziquka , kodwa kungathethwa nge zi kuphela, ii-suphamakhethi, iivenkile nezithengisa ukutya, ezithengisa iimpahla, iivenkile ezizi wholesale okanye iikhemiti kufuneka zi:
misele indawo engumgangatho ibenekona ezine ezikwi skwe mitha
kuxhomekeke kubungakanani bendawo kwi skwe mitha, ukumisela ngokwenani labathengi kunye nabasebenzi abanokubangaphakathi kwisakhiwo nangaliphina ixesha ukuze ubone ukuba sanele na isithuba esikhoyo
thatha iziteps uqinisekise ukuba singabonela na abantu abame emgceni ngaphandle okanye ngaphakathi kwesakhiwo ngokubhekiselele kumgama ophakathi komnye nomnye oyi mitha enehalf kwabanye abantu
mabafakwe ihand sanithiza ezandleni abathengi kunye nabasebenzi phambi kokuba bangene kwisakhiwo
Bonke abasebenzi mabasebenzise imithetho enikiweyo malunga nokuphucula ukungasondelelani kwabasebenzi, okuquka:
ukuvumela abasebenzi basebenzele ekhaya nokucutha ukuba abasebenzi badibane emsebenzini
oku kulunngiselelwa isithuba esaneleyo
ukucuthwa kweentlangniso ezidibanisa abantu ndawonye
imilinganiselo ebekiweyo yabasebenzi abangaziwayo okanye abangayichazanga imeko yabo kwezempilo okanye i-comorbidities, nayiphi na imeko enokuthi ibeke abasebenzi kumngcipheko ophezulu wokuba babe neengxaki zokugula okanye ukufa ukuba bosulelwe yiCovid-19
Zonke iinkonzo zokuhambisa nokuthutha ziyakucuthelwa kumntu omnye okunokuqhakamshelwana naye ngexesha lokufika kwezinto okanye umthwalo.
Onke amashishini kufuneka enyule igosa elakujongana nokuthotyelwa kwemithetho ye Covid-19 eliyakuthi:
livelise isicwangciso senqanaba lokubuyela emsebenzini kwabasebenzi, phambi kokuba kuvulwe kwakhona emisebenzini. Isicwangciso masihambelane noku Annexure E in the regulations, mazithathelwe ukugcinwa ukuze zihlolwe yaye kufuneka zibe nezinkcukacha zilandelayo:
apho abasebenzi bevumelekile ukuba basebenze
sithini iisicwangciso selinqanaba-lokubuyela kwabasebenzi emsebenzini esisesi
yeyiphi imiqathango yokuziphatha yezempilo ekhuselekileyo emayilandelwe ngabasebenzi ukuzikhusela kwi Covid -19
iinkcukacha zegosa elijongene nokuthobela iCovid-19
inqanaba lokubuyela kwabasebenzi babo kunye nokulawula kokubuyela kwabanye abasuka kwamanye amaphondo, kwimetro, nakwizithili
ukwenziwa komlinganiselo oqinisekisa ukuba indawo yokusebenza ifikelele kumgangatho olandela ezempilo, indawo eyaneleyo yabasebenzi kwakunye nokumela kude kwabanye abantu abangabathengi kunye nabaniki zinkonzo, njengoko kuyimfuneko.
Ingaba kufuneka ndilivale ishishini lam ukuba alithengisi izinto ezibalulekileyo nezidingekayo ngeli xesha?
Ewe, livale ishishini lakho ukuba alinazinto zibalulekileyo nezidingekayo ngeli xesha, ngaphandle kokuba wena nabasebenzi bakho niyakwazi ukusebenzela endlini ngexesha lokumiswa-ngxi kwento yonke. Ukuba akukwazi ukusebenzela kwaphela, hlala ekhaya.
Ishishini lam lenza inkonzo ebalulakileyo – ingaba kufuneka ndibe nesiqinisekiso se-Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) ukuze likwazi ukusebenza nangexesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ukuba usebenza ngenkonzo ebalulekileyo AKUKHO mfuneko ingummiselo womthetho ukuba ufune isiqinisekiso seCompanies and Intellectual Property Commission (CIPC) ukuze ukwazi ukusebenza.
Isiqinisekiso seCIPC, sifumaneka kwiSebe lezoRhwebo, iMveliso noKhuphiswano kwi -Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) kwi- bizportal.gov.za website, asinyanzelekanga kwaye ayingommiselo wemiqathango yokumiswa ngxi kwezinto.
Ngaphezu koko, ngaphandle kokuba wena nabasebenzi bakho nisebenzela ekhaya ngexesha lokuthiwa ngxi kwezinto, xa ishishini lakho liqhuba lisebenza ngeli xesha kwaye ningasebenzi ngenkonzo ebalulekileyo, niya kuba ninetyala lokwaphula umthetho. Amapolisa aya kulivala ishishini lakho yaye ungabanjwa nokubanjwa, nokuba unaso isiqinisekiso seCIPC okanye akunaso.
Zeziphi iimpahla ezingundoqo ezinokungeniswa kweli?
Ezimpahla zingundoqo zingangeniswa kweli:
Ezemveliso zokutya, eziquka iziselo ezinganxilisiyo kunye nokutya kwezilwanyana
i- Sanitary pads, i-sanitary tampons, i-condoms
Izitshutshuzi zokuhlamaba izandla isanithayza, izibulali zintsholongwane, isephu, utywala obuyakusetyenziswa ezifaktri, ezokucoca ekhaya
ezemveliso, kunye nezixhobo zokuzikhusela, ngaphandle kwemaskhi zobuso
Imveliso zokunceda iintsana kunye nabantwana
ii-Personal toiletries, eziquka ezokulungisa iinwele , umzimba kunye nezokukhathalela ubuso, ii-roll-ons,
ezokunukisa kamnandi, kunye nezokukhathalela amazinyo
Ezokunikezela ngezonyango kunye neziBhedlele, izixhobo, amayeza, kunye nezixhobo zokuzikhusela (ngaphandle kwemaskhi zobuso)
Amafutha ezithuthi, kuquka amalahle, iinkuni, iparafini negesi
i-Hardware, izixhobo zokusebenza kunye nabanikezi zinkonzo
Iinkonzo zokuqokelela amalungu ezithuthi emva kwentengiso
IIkhemikhali, ezokupakisha nokusongela imithwalo elungiselelwa ukwenziwa kwemveliso yezizinto zichaziweyo
Umqhaphu okanye ilaphu elifunekayo ukuze kwenziwe imaskhi zobuso, kunye nezinye izixhobo zokuzikhusela
Izixhobo ze ICT ukwenzela ukusebenzela ekhaya kubelula kuquka namalungiseleleo okuthatha ikhomputha, iminxeba kunye nezinye izixhobo ze ofisi ezifunekayo ekhaya.
Zeziphi iimpahla ezivumelekileyo ukuphuma kweli?
Ezolimo i- Agricultural, nezokucola agro- processing, ezamahlathi kunye nemveliso yezentlazi
Ezemveliso entsha eyenziwayo kunye nemveliso yaseziMigodini evunyelweyo ukuba yenze imveliso
Ndingathengisa iimpahla ngokwendlela ye e-commerce?
Ewe, zonke iimpahla zingathengiswa ngokwe online esebenza ngekhompyutha yaye zingaziswa kubathengi, ngaphandle kotywala nesigarethi
Nceda uqinisekise ukuba uyayithobela imithetho ebekiweyo yezempilo xa usebenza ngentengiso yekhompyutha
Ishishini lam linika iimpahla ezingundoqo/ okanye iinkonzo ezingundoqo – kufuneka ndenze ntoni ukuze ndigcine abantu bekhuselekile?
Nceda ujonge isikhokelo sezempilo ngokwasemsebenzini
Ishishini lam lenza izinto/ inkonzo ezibalulekileyo nezidingekayo ngeli xesha – kufuneka ndenze ntoni ukugcina abantu bekhuselekile?
Onke amacandelo ekuhlaleni – kuquka amashishini nabaqeshi mabadlale indima ekunqandeni ukunwenwa kweCovid-19.
Apho kukwazekayo, jonga imeko yokubayeka abasebenzi bakho ukuba basebenzele ekhaya
Apho kungakwazekiyo, siceyacela kwaboshishino benze isigqibo esilungelene nabasebenzi – ngokuqinisekisa ukuba bayakwazi ukuba bawugcine umgama omalunga neemitha ezi-1,5 phakathi komntu kunye nomnye umntu, kwindawo ecocekileyo.
Ukuba abasenzi bakho basagula, mabahlale ekhaya
Jonga apho ungakwazi ukwenza umahluko – mhlawumbi ungathumela i-imeyile endaweni yokubamba intlanganiso, okanye indawo yokusebenza uyilingise kwakhona ukuzama ukuba kubekho umhlaba omkhulu wokusebenzela.
abaqeshi mabaqinisekise ukuba indawo yokusebenza icocekile kwaye isempilweni kunye nemiphezulu yezinto (umz. iidesika neetafile) nezinto (ezifana neefowuni neekeyboards) ziyasulwa rhoqo ngamanzi anesibulali zintsholongwane.
Qinisekisa ukuba isepha okanye isanithayiza yezandla ikhona eza kusetyenziswa ngabasebenzi ukuhlamba izandla nabaxhasi. Kucetyiswa ukuba unohambo olungenasizathu siphathekayo nolungabalulekanga oluya kwiindawo ezichaphazelekilyo ulurhoxise okanye ulumise ukuba uyagula, ingakumbi abantu abadala abakhenkethayo nabantu abanezigulo ezingapheliyo okanye abasele benizugulo zabo kakade.
Ukuba akunakulumisa uhambo lwakho, qinisekisa ukuba abasebenzi bayayilandela imiyalelo esuka kwiziphathamandla zendawo zaloo ndawo niya kuyo. Ukuba, umzekelo baxelelwa ziziphathamandla zendawo ukuba bangayi endaweni ethile abasebenzi bakho kufuneka bamamele benze imiyalelo abayixelelwayo. Abasebenzi bakho kufuneka bathobele imiqathango yendawo emalunga nokukhenketha, ukuhamba okanye iindibano zabantu abaninzi kulo ndawo baya kuyo.
Aza kuyazi njani amagosa agcina ucwangco into yokuba abasebenzi bam basebenza kwishishini okanye umbutho anikezela izinto okanye iinkonzo ezibalulekileyo nezidingekayo ngeli xesha?
Ukuba ishishini lakho okanye umbutho wenza izinto okanye iinkonzo ezibalulekileyo nezidingekayo, ngoko ke kufuneka uwabhale phantsi amagama abo ubachongileyo nabaya kuthi basebenze ngeli xesha lokumiswa-ngxi kwezinto.
Yintoni endiyixelela abasebenzi bam abasebenzisa izithuthi sikawonkewonke?
Apho kukwazekayo, bavumele abasebenzi bakho ukuba basebenzele ekhaya ngeli xesha lokumiswa-ngxi kwezinto. Ukuba kufuneka bakhwele ukuya emsebenzini, nceda ubanike amaphepha emvume afunekayo, achazayo ngokubhaliweyo ukuba baya emsebenzini njengoko besenza umsebenzi oziinkonzo ezibalulekileyo nezidingekayo.
Ziibhasi kuphela, iiteksi (kuquka iiteksi zohlobo lweminibhasi), izithuthi ze e-hailing, neemoto ezincinci zingasetyenziswa ngeli xesha lokumiswa-ngxi kwezinto.
Baya kuvunyelwa ukusebenza ukusuka ngentsimbi yesi-05h00 ukuya ngentsimbi ye-9h00 baphinde ukusukela ngentsimbi yesi-16h00 ukuya ngentsimbi yesi-20h00. Ukuba ishishini lakho okanye umbutho unikezela ngezinto/ngenkonzo ezibalulekileyo nezidingekayo kwaye abanye babasebenzi bakho abakwazi ukuya emsebenzini, njengomqeshi, kufuneka uzame wenze amalungiselelo ezinto zokukhwela ukuze abasebenzi bakho beze emsebenzini.
Ukuba abasebenzi benkonzo ezibalulekileyo nezidingekayo banengxaki zokuthutha abasebenzi bazo ukuya emzebenzini, bangaqhagamshelana neGosa eliyiNtloko kwiSebe lezoThutho nemisebenzi yoLuntu kule dilesi: HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za, bachaze ingxaki yesithuthi abasisebenzisayo ukuya emsebenzini.
Nceda unike iinkcukacha ezicacileyo, kuquka inani labantu ekufuneka bethathiwe uchaze ukuba basuka phi besiyaphi ngabani ixesha. Ukuba kunyanzelekile ukuba abasebenzi bakho baye emsebenzini kwaye kufuneka basebenzise isithuthi sikawonkewonke, nceda ubazise ukuba ube neengxoxo nabaphathi bezithuthi zikawonkewonke ukubazisa ngeengozi nezinto ezonokwenzeka ngenxa yokuqhambuka kwesifo iCovid-19 kwaye sisebenza ngokuzimisela naba basebenzi ukuqinisekisa ukuba izithuthi zikawonkewonke.
Abantu abanika inkonzo yezithuthi zikawonkewonke baliphakamisile izinga labo lokucoca kwanamaxesha okucoca, oko kubangele ukutshintsha kwendlela yabo yokwenza izinto. Basoloko bevule iifestile kwaye basebenzisa iisanithayiza kwizithuthi. Ukuba abasebenzi bakho bakhwela izithuthi zikawonkewonke mabaqinisekise ukuba balandela imiqathango yokunqanda ukunwenwa kweCovid-19 kwaye kukho umgama oqingqwe ngummiselo phakathi kwabo nabakhweli kwaye isithuthi abahamba ngaso masingabi nabakhweki abangaphaya kwe-50% yabantu ekuvumeleke ukuba ibathwale.
Mabaqiniseke ukuba yonke imiqathango yokhuseleko neyempilo iyalandelwa ukunqanda ukusasazeka kweCovid-19, efana nokuvula iifestile, ukuzinqanda ungabambi nje yonke into le, imiphezulu yezinto, njengokubamba intsimbi ekubanjelwelwa kuyo, baze bahlambe izandla zabo ngoko nagoko okanye bazifake ingaphimbi kokuba kohambo nasemva kohambo.
Kuya kwenzeka ntoni xa ndisenza inkonzo ebalulekileyo yaye abasebenzi bam bengakwazi ukuya kufika emsebenzini?
Ukuba isishishini lakho okanye iqumrhu / umbutho usebenza ngeempahla ezibalulekileyo okanye iinkonzo ezibalulekileyo yaye nawuphi na umsebenzi wakho akakwazi ukuhamba aye kufika emsebenzini, njengomqeshi, kufuneka wenze iinzame ezifanelekileyo zokuba abasebenzi bakho bakwazi ukufika emzebenzini.
Ukuba uye wadibana neengxaki nawuphi na umqeshi osebenza ngeenkonzo ezibalulekileyo angakwazi ukubathutha abasebenzi bakhe baye kufika emisebenzini, angaqhaganmshelana neSebe lezoThutho neMisebenzi yakwaRhulumente kwi- HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za, achaze imeko yengxaki ahlangabezana nayo yothutho lwabasebenzi. Uyacelwa unike iinkcukacha ezifunekayo, kuqukwa inani labantu obafunela isithuthi, indawo abasuka kuyo, indawo abaya kuyo nexesha.
Kufuneka ndilivale ishishini lam ngexesha lokumiswa-ngxi kwezinto – ingaba ndingaqhubeka ndibe nesetyhurithi nabasebenzi abalungisa izinto apha kwisakhiwo?
Ewe, ungaqhubeka unesetyhurithi nabasebenzi abalungisa izinto ekwisakhiwo seshishini lakho. Ngeli xesha besemsebenzini mabenze yonke imiqathango yokhuseleko neyempilo ukunqanda ukunwenwa kweCovid-19.
Ndingumfama - ndingazifumana phi iinkcukacha ezithe vetshe malunga nokusebenza ngeli xesha lokumiswa ngxi kwezinto?
Ngeenkcukacha ezithe vetshe malunga neziphumo zemigaqo yokumiswa ngxi kwezinto kwicandelo lezoLimo nokuLungelelaniswa kwezoLimo yiya ku-: www.elsenburg.com